३३ वर्षपछि उपविजेता बनेको संकटाले ३५ लाख पाउने, थ्री स्टार तेस्रो | गृहपृष्ठ
Home खेल विविध ३३ वर्षपछि उपविजेता बनेको संकटाले ३५ लाख पाउने, थ्री स्टार तेस्रो
on: १९ पुष २०७५, बिहीबार १२:२५ खेल विविध
३३ वर्षपछि उपविजेता बनेको संकटाले ३५ लाख पाउने, थ्री स्टार तेस्रो
पुस १९, काठमाडौं । शहीद स्मारक ‘ए’ डिभिजन लिग फुटबल प्रतियोगितामा संकटा क्लबले दोस्रो स्थान पक्का गरेको छ । बुधवार ललितपुरस्थित एन्फा मैदानमा भएको १२ औं चरणको खेलमा थ्री स्टार क्लबलाई २–१ गोलले पराजित गर्दै संकटा क्लबले दोस्रो स्थान पक्का गरेको हो ।
जारी लिगमा १२ खेलबाट २८ अंक जोड्दै संकटाले दोस्रो स्थान पक्का गरेको छ । दोस्रो स्थान पक्का गरेसँगै संकटाले रू. ३५ लाख प्राप्त गर्नेछ । यसअघि ११ चरणमा लगातार जित निकालेको मनाङ मर्स्याङदी लिग विजेता बनेको छ । उसले रू. ५० लाख प्राप्त गर्नेछ ।
संकटा क्लबले ३३ वर्षपछि ‘ए’ डिभिजन लिगमा उच्च स्थान हासिल गरेको हो । संकटाले यसअघि २०४२ सालमा लिगको उपाधि जितेपछि लिगमा सबैभन्दा उच्च प्रदर्शन यसपटकको लिगमा हात पर्न सफल भयो । तीन पटकको लिग च्याम्पियन संकटा लिगको शुरुआतदेखि नै राम्रो लयमा देखिएको थियो । उपाधि मनाङले लगेपछि दोस्रो स्थानको होडमा रहेको अर्को क्लब थ्री स्टारलाई हराउँदै उसले दोस्रो स्थान हासिल गर्यो ।
खेलमा शुरुआती अग्रता जोगाउन नसक्दा थ्री स्टार पराजित भएको हो । संकटालाई जित दिलाउन अमित तामाङले दुई गोल गरे । दुवै गोल अमितले पेनाल्टीमार्फत गरेका थिए । थ्री स्टारका रञ्जन विष्टले एक गोल गरे ।
खेलको ३० औं मिनेटमा रञ्जनले गोल गर्दै थ्री स्टारलाई शुरुआती अग्रता दिलाएका थिए । तर, खेलको ४२ औं मिनेटमा अमित तामाङले पेनाल्टीमा गोल गर्दै संकटालाई खेलमा फर्काए । थ्री स्टारका सुनिल बलले आफ्नो डिबक्समा गल्ती गरेपछि पाएको पेनाल्टीमा अमितले गोल गरेका हुन् ।
पहिलो हाफ एक/एक गोलको बराबरीमा सकिएको खेलको दोस्रो हाफमा संकटाले थप एक गोल फर्कायो । ६३ औं मिनेटमा थ्री स्टारका विक्रम लामाले संकटाका सौजन राइलाई पेनाल्टी बक्सभित्र लडाएपछि संकटाले दोस्रो पेनाल्टी पाएको थियो । जसमा अमितले पुनः गोल गर्दै संकटालाई २–१ को जित दिलाए । खेलमा अमित म्यान अफ दि म्याच घोषित हुँदै रू. १० हजार प्राप्त गरे । तेस्रो स्थानमा रहेको थ्री स्टारको १२ खेलबाट २३ अंक छ ।
तेस्रो स्थानको टुङ्गो भने १३ औं चरणको खेलपछि मात्र लाग्नेछ । जारी लिगमा थ्री स्टारको २३ र त्रिभुवन आर्मी क्लब चौंथो स्थानमा छन् । दुवै टोलीले एक/एक खेल्न बाँकी छ । अन्तिम खेलमा जित हासिल गरे थ्री स्टार तेस्रो हुनेछ । पराजय वा बराबरीको नतिजा आए र आर्मीले अन्तिम खेलमा जित निकाले आर्मी तेस्रो हुनेछ ।
ओलावाले र धिमाल उच्च गोलकर्ता
जारी लिगको १२ औं चरणका खेल सकिदासम्म मनांका अफिज ओलावाले र थ्री स्टारका रञ्जित धिमाल उच्च गोलकर्ता रहेका छन् । दुवै खेलाडीले समान सात/सात गोल गर्न सफल भएका छन् ।
त्यसैगरी हिमालयन शेर्पाका विश्वास श्रेष्ठले छ तथा थ्री स्टारका रञ्जन विष्ट, एपिएफका युवराज खड्का, मनाङका अञ्जन विष्ट र संकटाका अमित तामाङले समान पाँच/पाँच गोल गर्न सफल भएका छन् ।
बाह्रौं चरणका खेल समाप्तिसँगै शत प्रतिशत नतिजासहित मनाङ ३६ अंकका साथ उपाधि रक्षा गर्दै पहिलो स्थानमा छ भने २८ अंकका साथ संकटाले पनि दोस्रो स्थान सुरक्षित गरेको छ । तेस्रो स्थानको थ्री स्टारको २३, चौंथो स्थानको त्रिभुवन आर्मी क्लबको २२, पाँचौ स्थानको एपिएफको २०, छैटौं स्थानको नेपाल पुलिस क्लबको १८, सातौं स्थानको हिमालयन शेर्पाको १७ अंक रहेको छ ।
त्यसैगरी ‘ए’ डिभिजन लिगमा नवप्रवेशी च्यासल युथ क्लब १५ अंकसहित आठौं, १३ अंकसहित सरस्वती युवा क्लब नवौं, १२ अंकका साथ जावलाखेल युथ क्लब १० औं, समान नौ/नौ अंक रहेको ब्रिगेड ब्वाइज र फ्रेन्ड्स क्लब क्रमशः ११औं र १२ औं, सात अंक रहेको मछिन्द्र १३ औं र छ अंक रहेको न्युरोड टिम (एनआरटी) तालिकाको अन्तिम स्थानमा रहेका छन् । रासस
‘ए’ डिभिजन लिग : मनाङ २ खेलअगावै लिग च्याम्पियन
१३ पुष २०७५, शुक्रबार १४:३५
‘ए’ डिभिजन लिग : एपिएफले मच्छिन्द्रलाई ३–१ ले हरायो
३ पुष २०७५, मंगलवार १३:५९
‘ए’ डिभिजन लिग : हिमालयन शेर्पा विजयी, एनआरटी जितबिहीन
२ पुष २०७५, सोमबार १७:०८
‘ए’ डिभिजन लिगः जाउलाखेललाई हराउँदै थ्रीस्टार दोस्रो स्थानमा
२३ मंसिर २०७५, आईतवार १८:०५